Ny sary 8 manaitaitra indrindra amin'ny tantara | Famoronana an-tserasera
Manome antsika sary mahagaga ny tontolon'ny sary, saingy tsy manana fanazavana mitombina foana izy ireo. Izany no mitranga amin'ireo sary ireo. Tsy manan-danja amin'ny endrika mampiavaka azy ireo izy ireo na amin'ny fanatanterahana ny famonoana ilay mpaka sary, raha tsy izany noho ny tantara afenin'izy ireo ao aoriana, ny lanjan'ny fady napetrak'izy ireo teo imason'ny rehetra. Ireo sary ireo dia nampihorohoro izao tontolo izao ary nangataka fanazavana tamin'ireo matihanina amin'ny sary sy ireo mpahay siansa be saina indrindra. Mandrak'androany dia mijanona ho zava-miafina mandrakizay an'ny tontolontsika izy ireo. Fanahy, UFO, mpandeha fotoana ... Toa hadalana tokoa izany, fa ny marina dia na inona na inona sary, misy akony betsaka izany.
Mihevitra ve ianao fa momba ny môtô na lesoka? Lazao anay ny hevitrao momba ireto sary ireto!
Mihoatra ny indray mandeha no nilazana fa misy zavatra mihodina manodidina ny planetantsika. Antsoina hoe zavatra ity "The Black Knight", sambany izy io no hita tamin'ny taona 1927 raha ny marina mbola ao io. Betsaka ny zavatra nolazaina momba an'io zavatra io ary misy petra-kevitra maro natao. Betsaka no milaza fa ny asany dia ny mandefa signal any amin'ny faritra hafa amin'izao rehetra izao momba ny asantsika. Mahagaga.
Tamin'ny 1967, Stefan Michalak, dia nilaza ampahibemaso fa nifandray tamin'ny zavaboary ivelan'ny tany izy ary manokana tamin'ny UFO mandra-pahatongan'ny hazavana nipaoka azy ary namela azy ireo miafina famantarana eo amin'ny tratra mandritra ny fiainana. Tsy nisy nahavita nahazo fanazavana mitombina (na ireo dokotera nandinika ireo toerana mahaliana ireo aza) ary nanjary tranga angano teo amin'ny sehatry ny ufolojia manerantany.
Elaela izahay vao nilaza ny planeta malaza indrindra amin'ny habakabaka, ilay sakaizantsika Martsa. Izy io dia manana io endrika hafahafa io amin'ny fanamaivanana azy izay mitondra fitoviana mahavariana amin'ny endrik'olombelona. Fananganana zavaboary afaka mipetraka ao ve izy io?
Eto isika dia manana asa antsoina "Ny fandresen'ny fahavaratra" ary inona no manomboka amin'ny taona 1538. Raha mijery akaiky isika dia afaka mahita ... Zavatra manidina tsy fantatra? Na sambo avy any amin'ny planeta hafa izy ireo na tsia, ny marina dia manana fitoviana miharihary amin'ny zavatra takatsika amin'ny sambo vahiny.
Fianakaviana antonony iray, ny Coopers, no naka ity sary ity taoriana kelin'ny nifindrany nankany amin'ny tranony vaovao. Ilay sary dia nanala azy ireo rehefa novolavolaina; mila mahita azy fotsiny ianao vao hahatakatra ny antony. Tsy maintsy nampiasa fanampiana ara-tsaina nandritra ny fotoana ela ny fianakaviana, ity fianakaviana ity tsy nanana fahalalana momba ny sary, ka tsy afaka namorona montage izy ireo hametrahana ilay korontana amin'ny haino aman-jery.
Angamba iray amin'ireo sary matoatoa malaza indrindra teo amin'ny tantara. Masinina Mabel Nandeha nitsidika ny reniny efa maty tao amin'ny fasana izy, naka sary ny vadiny izay niandry azy tao anaty fiara. Tsy nahateny izy rehefa namolavola ilay sary, nahita olona nipetraka teo amin'ny seza aoriana izy; tsy mihoatra na latsaka noho ny reniny efa tara io.
Ity lamba ity dia manana lamba tantsambo marobe. Na dia toa sary tsotra sy mahazatra aza izy io, dia antontan-taratasy manan-tantara izay nanangana teôria, angano ary, fanontaniana ambonin'izany rehetra izany. Raha mbola tsy hitanao ny zava-mitranga amin'ity sary ity dia tokony hipetrakao amin'ny masonao ilay zazalahy manao solomaso solomaso. Tsy mieritreritra ve ianao fa tsy mifanaraka mihitsy amin'ny estetika ataon'ny olon-kafa? Toa tsy mifanaraka amin'ny toerany ve izany? Na izany na tsy izany, dia afaka mandalo tanteraka ho an'ny zazalahy iray amin'ny taonantsika izy io. T-shirt mifono tery, palitao, volombava madio, solomaso ary DSLR eny an-tànany. Voalaza fa mpanao dia lavitra izy. Zazalahy iray nahavita nandeha tamin'io fotoana io tamin'ny androntsika izao. Toa foronina amin'ny siansa io, saingy ny sary dia tsy namboarina ary notsidihin'ny olona maro tao amin'ny fampirantiana tranombakoka kanadiana, na dia etsy an-danin'izany rehetra izany aza (ny akanjo, solomaso ary ny hafa dia mety noforonina tanteraka tamin'izany fotoana izany, saingy izy io dia lavitra ny fironana amin'ny sisa).
Freddy Jackson, mpikambana ao amin'ny tafika, dia maty tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina nandritra ny fotoam-pivavahana iray, na izany aza roa andro taorian'ny nahafatesany dia niseho niaraka tamin'ny sakaizany amin'ity sary ity izy. Momba izany sary angano hafa avy amin'ny tontolon'ny paranormal.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Sary 8 manaitaitra indrindra amin'ny tantara
Momar dia hoy izy:
Betsaka ny zavatra hafa, ankoatry ny Volana, mihodikodina amin'ny Tany, ary tsy miresaka satelita artifisialy fotsiny no lazaiko. Amin'izao fotoana izao dia manana zanabolana quasi-satellite 6 ny Tany, ary maro amin'izy ireo no efa fantatra am-polony taona maro ary manana anarana, toa ny Cruithne (3753 Cruithne). Na dia amin'ny tranga sasany aza dia tsy izy ireo no mihodina ny Tany, fa mizara orbit miaraka aminy manodidina ny Masoandro amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'izany, manome ny fahatsapana fa mihodina ny planetantsika.
Ny tarehy malaza eto amin'ny Mars dia ohatra mazava amin'ny pareidolia. Izy io dia ilay tranga niseho ihany tao amin'ny tandavan-tendrombohitra akaikin'i Segovia, izay, hita avy amin'ny faritra iray, dia toa vehivavy goavambe mandry (miatrika). Amin'ny tranga Face on Mars, dia fitambarana fampifanoherana be loatra, zoro fahazavana, famaritana ambany sary, sns. Nalaina sary indray izy vao tsy ela akory izay niaraka tamin'ny fitaovana tsara kokoa, ary na dia mora raisina aza ny tarehy dia mazava ho azy fa endrika voajanahary.
Matetika ny UFO amin'ny hosodoko amin'ny medieval, saingy tsy misy mistery lehibe kokoa. amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia ny fomban'ny singa (rahona, raha ny tapestry asongadinao). Amin'ny tranga hafa dia marika manokana izy ireo, toy ny orb Flemish izay afangaro amin'ny sasany amin'i Sputnik I.
Ilay "mpandeha ora" asehonao dia be resaka foana, eny, saingy tsy dia hafahafa toa azy izy. Ireo solomaso solomaso ireo dia efa ela be talohan'ny nakana ny sary (ohatra, i Ray-Ban dia nanao ny maodely Aviator hatramin'ny 1936, ary tsy niova firy izy ireo hatrizay). Ny fakantsary mbola miendrika SLR, azo antoka, saingy tsy voatery ho fanaingoana azy io. Misy fakan-tsary mitovy amin'izany koa, hatramin'ny Ady Lehibe Faharoa na talohan'izay aza (nanana laza be ny Alemanina, hany ka izy ireo no nampiasain'izy ireo tamin'ny iraka NASA nandritra ny am-polony taona maro). Tsy hanome lanja be ny fomba fitafy aho. Mahagaga ny fisehoan'ny akanjo taloha maoderina ...
Momba ny matoatoa, mahazatra ny fanantonana rindrina ary ny fihoaram-pefy, indrindra rehefa tsy manana traikefa ianao.
Valiny tamin'i Momar
Salama maraina ry Momar! Vaovao mahaliana. Ny marina dia hijanona ho latent foana ny adihevitra. Azontsika atao ny mahita azy amin'ny fomba fijery tsy mino sy amin'ny fomba fijery izay misy marimaritra iraisana azo atao. Ny tena tanjon'ity lahatsoratra ity dia ny hametraka hevitra mahaliana iray, ary izany tokoa, maninona no tsy misy fisehoan-javatra tsy afa-manoatra amin'ny fanjohian-kevitra sy ny fifehezan'olombelona? Misaotra namela anay ny hevitrao, arahaba!